“အတွေးစလေးတွေ”: ခရစ်စမတ်နဲ့ နှစ်ကူးမှာ . . . ( တက်ဂ်ပို့စ် )
Posted by Han Kyi at 1:59:00 am
ကိုယ့်ဖာသာတော့ ရေးပြီးပြီ၊ သူများတွေ ဘာရေးလဲ စောင့်ကြည့်နေတာ အကြံနဲ့ အကြံနဲ့ :P
နှစ်သစ်မှာ ချစ်ဇနီးနဲ့ နွေးထွေးနိုင်ကြပါစေနော့။
20 December 2011 at 02:27
Hehe :)) Sayar, I laughalot and like the way of your writing. Thank you so much.
20 December 2011 at 02:56
ဆရာကြည်ကအဖြေနပ်ပါ့တော့် ဆရာကတော်ဖတ်မိရင် သဘောကျအောင်ရေးတယ်ဗျိူးး
ရေးကြရေးကြ များတို့ကလာမယ်ကြာမယ်း)
ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ တပည့်ဖြစ်ရသူတွေ ကံကောင်းတယ်။
မဒမ်ဟန်ကြည်ကိုလည်း တီတင့်က Merry Christmas & Happy New Year wish လုပ်လိုက်
မြန်မှမြန်တဲ့ ဦးဟန်ကြည်ပဲ ...း)
အမေးနဲ့အဖြေကြားက သွက်လက်မျုလေးတွေကို တဝါးဝါး ရယ်မောရင်း...အားပေးသွားတယ်အကို...
ဘောက်ဆင်ဒေးမှာ မအော့ဘူးဆိုလို့ တင်းတယ်..
20 December 2011 at 11:34
ခရစ္စမတ်ဟာ ကျနော်နဲ့လားလားမှ မဆိုင်ခဲ့ဖူးပါဘူး ဆရာ။ ၀မ်းမနည်းပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ဖီလင်ဖြစ် တယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းများ “မ” စ ကြပါကုန် :(
ဦးဟန်ကြည်တို့ မဒမ်ကို ချစ်ပုံများနော်
နောင်လာနောက်သားညီငယ်တွေကို အားကျအောင် လုပ်နေပုံရတယ်
ဖတ်ရတာကိုက အလိုလို ပျော်လာတယ်
ဒီတစ်ခါ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ကြီးကြီးကို မဒမ်ကလည်း ကြိုက်မှာ သေချာပါတယ်
ဒီပိုစ့်လည်း ခရစ္စမတ် လက်ဆောင်ဘဲ မဟုတ်လား နော်
merry X' mass ပါဆရာရေ..
ခရစ်စမတ်မှာ မဒမ်ကို လက်ဆောင်နဲ့ မျက်နှာလုပ်ခွင့်ရသွားသလို ပို့စ်လေးနဲ့လဲ မျက်နှာလုပ်ခွင့် ရသွားလေရဲ့။ သားရွှေအိုးထမ်း ကိန်း ဆိုက်သကိုးဗျ။
ဆရာဟန်ကြည်တို့ စုံတွဲ ဘောက်စင်ဒေးမှာ မန်ယူ-၀ီဂန်ထိုင်ကြည့်နေစဉ် သူကြီးမင်းကတော့ တစ်ကိုယ်တည်း အခန်းအောင်း ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးသကာလ မန်ယူအောင်ပွဲလေးကို ရှုစားနေဖြစ်ဖို့ များပါကြောင်း။
22 December 2011 at 05:10
23 December 2011 at 19:34
ဆရာ.... နှစ်ကူးမှာ ကိုယ့်အိမ်လာလည်မယ့် ဧည့်လန် အယ်လေ ဧည့်သည်ကိုကော လက်ဆောင်ပေးချင်စိတ်မရှိဘူးလားဗျး))
25 December 2011 at 20:29
ဆြာဟန်တို့ကတော့ ပျော်နေပြီး)း)
(စိဘောက်ရှာမရလို့ လာအော်သွားပါတယ်း)